Isikhungo sosizo se-
Imibuzo mayelana nabalingisi, izengezo kanye neWebhu
Imibuzo mayelana ne-akhawunti yami
Uma ngicindezela inkinobho yokulanda lutho kwenzeka, yini okufanele ngiyenze?
Ulinde kodwa akukho okwenzekayo, akukho fayela elandiwe, mhlawumbe ngemva kwemizuzu embalwa elinde uthola umlayezo wephutha lohlobo "Isikhathi sokuxhuma" noma "ERR_EMPTY_RESPONSE" noma enye imilayezo ngokusho isiphequluli sakho se-inthanethi.
Eqinisweni, okulandwayo kusuka ku-Rikoooo ithunyelwa kusuka kwenye iseva yendawo ku-port 8888 (ngaphandle http://download.rikoooo.com:8888) lokhu kube nokuzinza okungcono kokulandwa ikakhulukazi namafayela weGigabytes amaningana.
Inkinga ukuthi i-firewall yomzila (i-Livebox, i-Freebox, i-Neufbox) yabasebenzisi abathile ihlelwe ukunqabela i-port 8888 (kanye ne-port 8080), ukuze wazi ukuthi ukhona kulolu cala, iya ku- Simviation.com futhi ulande noma yiliphi ifayela ngokungahleliwe, uma ukulanda kungaqali (kufana ne-Rikoooo), bese uphakathi kwalawo maphesenti amancane abasebenzisi abagibela i-port 8888 (ne-8080 ye-Simviation). Lezo zikebhe zivame ukusetshenziselwa isikhombimsebenzisi sewebhu, ukusakaza, ne-HTTP, ngakho-ke, kuphephile ukuvula.
Kufanele uxhume ku-router yakho (ex Livebox) bese wengeza umthetho ovula i-port 8888 TCP / UDP.
Nazi izixhumanisi kwezinye izihloko zesiNgisi ezichaza indlela yokuvula amachweba akho, unganqikazi ukwenza ucwaningo lwakho ku-Google usebenzisa igama lomnikezeli wakho wenethiwekhi ye-intanethi njengegama elingukhiye.
Xhumanisa kumavidiyo we-Youtube enama-tutorials amaningi (engeza umhlinzeki wakho we-inthanethi njengegama elingukhiye)
ngoMgqibelo March 03 by rikoooo
Ingabe lona kwakungu-eziwusizo?